Забур 108 CARS - Nnwom 108 ASCB
1Ao Onyankopɔn, mʼakoma atɔ me yam;
mede me kra nyinaa bɛto wʼayɛyie dwom.
2Monyane, sankuo ne bɛnta!
3Ao Awurade, mɛkamfo wo wɔ aman no mu;
mɛto wo ho dwom wɔ nnipa no mu.
4Wʼadɔeɛ so, ɛkorɔn sene ɔsoro;
wo nokorɛdie duru ewiem.
5Ao Onyankopɔn, ɛsɛ sɛ wɔma wo so tra ɔsoro,
na ama wʼanimuonyam aba asase nyinaa so.
6Fa wo nsa nifa gye yɛn na boa yɛn,
7Onyankopɔn akasa afiri ne kronkronbea sɛ,
“Nkonim mu na mɛkyɛ Sekem mu
na masusu Sukot Bɔnhwa.
8Gilead yɛ me dea; Manase nso saa ara;
Yuda yɛ mʼahempoma.
9Moab yɛ me dwaresɛn,
Filistia so na mebɔ ose.”
10Hwan na ɔde me bɛkɔ kuropɔn a wɔabɔ ho ban no mu?
11Ao Onyankopɔn, ɛnyɛ wo na woapo yɛn?
Wo ne yɛn nsraadɔm renkɔ ɔsa bio anaa?
12Boa yɛn tia ɔtamfoɔ no,
13Onyankopɔn wɔ yɛn afa yi, yɛbɛdi nkonim,
ASCB : Nnwom 108